Golaha wasiirada Galmudug oo shir muhiim ah yeeshay iyo Madaxweyne kuxigeenka oo…. – Kismaayo24 News Agency
Golaha wasiirada Galmudug oo shir muhiim ah yeeshay iyo Madaxweyne kuxigeenka oo….
Arimaha Bulshada Breaking News English News Kaydka Wararka Xulka ah Maqaalo Maqaalo iyo Warar Somali News Top News
by admin 19th January 2016 19th January 2016 0103
Shir‬ aan caadi ahayn oo ay iskugu yimaadeen Golaha wasiirada ee Galmudug oo u godominayay madaxwayne Ku xigeenka Dowlad Gobleedka ka Galmudug Mudane ‪‎Mahamed Hashi Abdi‬ oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Galmudug ayaa waxaa looga hadlayay wax qabadkii xukuumada iyo hormarinta guud ee degaanada Galmudug.
Shirkaan ayaa qaar ka mid ah wasaaradaha Galmudug ay ku soo bandhigeen waxqabadkoodi 2015 ki ayago sido kale so bandhigeen waxqabadka ay damacsan yihiin 2016 ka.
Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Mudane Maxamed Xaashi Cabdi ayaa Golaha wasiirada Galmudug kula dardaarmay in ay laba jibaaran shaqada ay u hayaan shacabka galmudug oo ayagu adegyo kala duwan ka sugaya dowlada Galmudug.
Shirka Golaha wasiirada ayaa waxaa sido kale lagu soo hadal qaday furitaanka kala fadhigii labaad ee Barlamanka Galmudug oo uu maalmo ka hor furay Madaxweyne kuxigeenka Galmudug maxamed Xaashi Cabdi.
Tan iyo intii la magacaabay Golaha wasiirada Galmudug oo hada laga joogo wax ka yar 6 bilood ayaa waxay ku tilabsadeen hormar balaaran marka laga eego mashaaricda ay ku soo kordhiyeen guud ahaan Galmudug,
Xaaladda amaan ee Boosaaso oo degen ka dib shaqaaqooyin ay maamulku ka hadleen
XOG: Tirada Ciidamadii Kenya ee ku sugnaa Ceelcade kahor weerarkii Shabaab oo la Ogaaday, Iyo Askar Kenyan ah oo Firxad ah oo gaaray Garbahaareey.
XOG: Wasiir Odowaa oo si Cad uga horyimid Qorsho ay in Mudo ah u Ol’oleynayeen Xubno kamid ah Damul-jadiid
Tifaftiraha K24 23rd December 2016 23rd December 2016
Hargeysa:- Madaxweyne Muuse Biixi oo Wasiirrada Somaliland ka mamnuucay Warbaahinta
Ahmed sudani 7th March 2018
Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 04 March 2020 ka dhacay Magaalada Muqdisho shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta XFS